प्लाज्मा .5.2.२ उपलब्ध छ, नयाँ [अपडेट गरिएको] के हेरौं लिनक्सबाट
Ya हामी केडीई एससीको नयाँ युगमा छौं। प्लाज्मा .5.2.२ नयाँ कार्यक्षमताहरू र धेरै बग फिक्सहरूमार्फत जारी गरिएको छ, जुन हामी तल कुरा गर्नेछौं।
1 नयाँ प्लाज्मा .5.2.२ कम्पोनेन्टहरू
2 संक्रमण यसको मार्गमा छ
3 प्लाज्मा .5.2.२ म्यानुअल स्थापना
नयाँ प्लाज्मा .5.2.२ कम्पोनेन्टहरू
प्लाज्माको यो संस्करण केडीईलाई अझ पूर्ण डेस्कटप बनाउन केहि नयाँ कम्पोनेन्टको साथ आउँदछ।
ब्लुडेभिल: यसले हामीलाई ब्लुटुथ उपकरणहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिनेछ। हामी हाम्रो माउस, कुञ्जीपाटी कन्फिगर गर्न सक्दछौं, र फाइल पठाउन / प्राप्त गर्नका साथै यस प्रविधिसँग उपयुक्त उपकरणहरूको नेभिगेट गर्न सक्दछौं।
KSSHAskPass: यदि हामी ssh द्वारा अन्य कम्प्युटरहरू पहुँच गर्छौं, र यो तार्किक हुनुपर्दछ, प्रयोगकर्तासँग पासवर्ड छ, यो मोड्युलले पासवर्ड प्रविष्ट गर्न हामीलाई एउटा ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस प्रदान गर्दछ।
मुओन: यो उपकरणको साथ (धेरैलाई पहिले नै ज्ञात छ) हामी तपाईको कम्प्युटरको लागि सफ्टवेयर र अन्य एड्-अनहरू स्थापना गर्न, सक्षम गर्न सक्नेछौं।
SDDM का लागि कन्फिगरेसन: SDDM अब प्लाज्माको लागि छनौटको पहुँच व्यवस्थापक हो, पुरानो KDM लाई बदल्दै, र यो नयाँ प्रणाली कन्फिगरेसन मोड्युलले तपाइँलाई विषयवस्तु कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ।
केडीई पर्दा: यो बहु मोनिटरहरूको लागि समर्थन कन्फिगर गर्न प्रणाली कन्फिगरेसन मोड्युल हो (पछि छवि हेर्नुहोस्)।
GTK अनुप्रयोगहरूको लागि शैली: यो नयाँ मोड्युलले तपाईंलाई जिनोम अनुप्रयोगहरूको थिम कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ।
केडीई सजावट- यो नयाँ लाइब्रेरीले KWin का लागि विषयवस्तुहरू अझ विश्वसनीय बनाउँदछ। योसँग प्रभावशाली मेमोरी, प्रदर्शन र स्थिरता सुधारहरू छन्। यदि तपाइँ एक सुविधा हराइरहेको छ, चिन्ता नलिनुहोस्, यो प्लाज्मा 5.3..XNUMX मा फिर्ता हुनेछ।
र, अब हामी प्लाज्मामा एक विजेट हटाउने कार्यलाई अन्डु गर्न सक्छौं:
KRunner अब यो अधिक शक्तिशाली र अधिक संगठित भएको छ जब हामीलाई आवाश्यक जानकारी प्रदर्शन गर्ने कुरा आउँछ, र यसले हामीलाई संगीत प्लेयरलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, यो अब कुञ्जी संयोजन प्रयोग गरेर सुरु गरिएको छ alt + Espacio.
केविन यो पहिले नै नयाँ विषयवस्तुको साथ आउँदछ जुन हामीले पहिले नै पूर्वनिर्धारित देख्यौं र हामीसँग कर्सर र आइकनहरू नयाँ सेट छन् ब्लीज (Brisa), जबकि मेरो विचार मा यो अझै पनी (आईकन) समर्थन अनुप्रयोग को एक धेरै।
बाँकीको लागि हामीसँग डेस्कटपको लागि नयाँ विजेटहरू छन्, वैकल्पिक अनुप्रयोग मेनू (किकर) तपाईं मेनुबाट अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पादन प्रकार्यहरू थप्न सक्नुहुनेछ। बालू तपाईं अप्टिमाइजेसन पाउनुहुन्छ र अब स्टार्टअपमा कम कम CPU खपत गर्नुहुन्छ। क्वेरी विश्लेषकसँग नयाँ प्रकार्यहरू छन् उदाहरण को लागी Krunner मा "प्रकार: अडियो" लेख्नुहोस् र अडियो परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्।
स्क्रिन लकरमा, लगइन्डको साथ एकीकरण सुधार गरिएको छ सुनिश्चित गर्नका लागि पर्दा निलम्बन गर्नु अघि ठीकसँग बन्द छ। स्क्रिन पृष्ठभूमि सेट गर्न सकिन्छ। आन्तरिक रूपमा यसले वेल्यान्ड प्रोटोकलको अंश प्रयोग गर्दछ, जुन लिनक्स डेस्कटपको भविष्य हो।
त्यहाँ धेरै मोनिटरहरू ह्यान्डल गर्नेमा सुधारहरू छन्। बहु मोनिटरहरूको लागि खोज कोड XRandR विस्तार सीधा प्रयोग गर्न पोर्ट हुनको लागि व्यवस्थित गरियो र धेरै सम्बन्धित बगहरू निश्चित गरिएको थियो। यी र अन्य सुधारहरू यसमा देख्न सकिन्छ नोट जारी गर्नुहोस्.
संक्रमण यसको मार्गमा छ
कम से कम आर्चलिनक्समा हामीसँग पहिले नै केहि प्याकेजहरू छन् जुन पुरानो केडीई perfectly.१4.14 पूरै पूरक हुन्छ, केट, कन्सोल, यसको दुई उदाहरणहरू छन्। जहाँसम्म केडीई for को लागि प्रयोगकर्ता सेटिंग्स राखिनेछ ~ / .kde4 /, नयाँ अनुप्रयोगहरूको लागि तिनीहरू बचत हुनेछन् ~ / .config / को रूप मा आर्क विकी.
यस क्षणमा मलाई यकिन छैन कि प्लाज्मा .5.2.२ आर्चलिनक्समा पूर्ण रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ कि, मलाई लाग्छ यो सक्दछ। पछि हामी तपाइँलाई यसको बारेमा जानकारी ल्याउँदछौं र सम्भव भएमा यो कसरी गर्ने।
प्लाज्मा .5.2.२ म्यानुअल स्थापना
मैले भर्खरै एन्टेरगोसबाट म्यानुअल स्थापना गरें (ग्राफिकल वातावरण बिना) र मूलतः यो स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ त्यसैले सबै कुरा बढी वा कम शिष्टतापूर्वक कार्य गर्दछ:
$ sudo pacman -S xorg plasma-meta konsole plasma-nm kdebase-dolphin sni-qt kেমલ્ટ्युलमेडिया-किमीक्स नेटवर्कमैनेजर
KMix ले अझै कार्य गर्दैन। यो यस्तो देखिन्छ:
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » प्लाज्मा .5.2.२ उपलब्ध छ, नयाँ के हुन्छ हेरौं [अपडेट गरिएको]
म आर्चलिनक्समा अघिल्लो संस्करणहरू प्रयोग गर्न कोशिस गर्दै छु, तर मलाई धेरै समस्याहरू वा असंगतिहरू थिए, मलाई आशा छ कि चाँडै यो उत्पादनमा केडीई प्लाज्मा प्रयोग गर्न सम्भव हुनेछ।
इडेकासो लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खरै यसलाई आधारको रूपमा एन्टेरगोसको प्रयोग गरेर स्थापना गरें र दुर्भाग्यवस यो अझै पनि केडीई 4.14.१XNUMX बाट धेरै चीजहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै डल्फिन। यो अझै अभाव ..
म यो अधिक परिपक्व केडी for को लागि कुर्नेछु, किनकि काउसले केडीई 5.१4.14.4..XNUMX को साथ राम्रो गरिरहेछ
Aioria लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, Anke फेब्रुअरी को अन्त मा kf5 मा जाँदैछ गणना गर्दछ, केवल Kf5 र प्लाज्मा5राख्न जाँदैछ, यसले केडीई4राख्न रोकिनेछ।
डागोलाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो तरिकाले जानकारी ...
यस्ता चीजहरूको लागि मैले आर्चलिन्क्स छुटाउँछु। तर यस बीचमा म फेडोरामा केडीईको मज्जा लिन्छु।
Leproso_Ivan लाई जवाफ दिनुहोस्
र तपाइँ यसलाई गर्न राम्रो गर्नुहोस्।
र तपाइँ यसलाई गर्न राम्रो गर्नुहोस्। साथै, तपाईं फेडोरामा प्लाज्मा5स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
खैर, म मेरो आर्क अनुप्रयोगहरूमा के भइरहेको थियो भनेर त्यति सचेत थिएन। मैले ग्लोबल मेनू प्रयोग गरें र पहिले नै kwrit, kate र konsole ले यो हराइसकेको थियो। त्यसोभए मैले किन महसुस गरें। अब, त्यहाँ मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने केहि छ र यो एन्ड्रिया स्कार्पिनोको घोषणा थियो https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ जसमा यसले प्लाज्मा .5.2.२ संस्करणमा परिवर्तन सिफारिस गर्दछ।
के यो प्लाज्मा .5.2.२ मा स्विच गर्न वास्तवमै राम्रो विचार हो? यदि हो भने, यो गर्नको लागि सही तरिका के हो? वा यो सफा स्थापना गर्न अझ राम्रो हुनेछ?
अग्रिम, धेरै धेरै धन्यवाद।
Khirah लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग दुई शंकाहरू छन् ... हेरौं यदि तपाईंलाई केहि थाहा छ भने ...
के KWin स्ट्यान्डअलोन स्थापना हुनेछ?
के डल्फिनलाई के भइरहेको छ र त्यहाँ विकल्प हुनेछ?
Badoo बिना प्लाज्मा स्थापना गर्न सकिन्छ?
एस्करपोनोक्सलाई जवाफ दिनुहोस्
ठिकै छ, म अहिलेसम्म राम्ररी जान्दिन। मेरो टिप्पणी माथि हेर्नुहोस् .. 🙁
राम्रो लाग्यो! जानकारी को लागी धन्यवाद ... Slds!
जुआनरा २० भन्यो
केडीई डिफल्ट द्वारा अब धेरै राम्रो भइरहेको छ
Juanra20 लाई जवाफ दिनुहोस्
फर्नांडो गोन्जालेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
उत्कृष्ट देखिन्छ, प्रत्येक दिन केडीई सुधार गर्दछ। र कार्यक्षमताहरूले यसलाई उल्लेख पनि गर्दैन, धेरै राम्रो, आशा छ कि माइक्रोसफ्ट र एप्पल व्यक्तिहरू केडीईबाट आफ्ना विचारहरू चोर्दैनन्।
फर्नान्डो गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले देखेको सब भन्दा सुन्दर केडीई डिफल्ट लेआउट।
मलाई कार्यक्षमताको स्तरमा थाहा छैन ... तर यसले मेरो ध्यान खिचेको छ कि यो पूर्वनिर्धारित रूपमा धेरै राम्रो देखिन्छ, मन्ड्रिभाबाट मैले यति सतर्कता देखिन।
म केडीई stable को स्थिर संस्करणको लागि कुर्दै छु
केडी the सब भन्दा स्थिर डेस्कटप हो जुन मैले प्रयोग गरेको छु कि म अहिलेको लागि यसलाई परिवर्तन गर्दिन
Susl लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं प्लाज्मा using प्रयोग गर्नेहरूका लागि केडीई 5.१4.14 को तुलनामा भेडाको उपभोगको बारेमा कसरी?
उनीहरूले टिप्पणी गरे कि उपभोग एकदमै घटेको छ। मैले यसलाई एक हप्ता (अघिल्लो एक, .5.1.१) परीक्षण गरिरहेको थिएँ, र मैले थाहा पाएँ कि यसले एकदम राम्रो प्रतिक्रिया देखायो, यसले यो प्रभाव प्रदान गर्‍यो कि यो केडी4भन्दा बढी तरल पदार्थ हो। अवश्य पनि, मसँग धेरै किविन र प्लाज्मा क्र्याशहरू थिए, र राम्रोसँग, मसँग कम्प्युटरले काम गर्ने भएकोले एकपटक मैले सही गरेको थिएँ र केडीई back मा फिर्ता गएँ। म कसरी कार्य गर्दछ भनेर हेर्न .4.२ लाई परीक्षण गर्नेछु। तर मलाई लाग्छ कि यसको अझै केडीई KDE को जस्तै स्थिर हुन अभाव रहेको छ।
धोका दिने भन्यो
यो मान्यता हुनुपर्दछ कि केडीई 4.14.१5 को तुलनामा, प्लाज्मा ले अधिक र्याम खपत गर्दछ।
यसले मलाई लगभग १०% 10 जीबी उपभोग गर्छ, त्यसैले यसले धेरै राम्रा उपभोग गर्दछ। तर त्यो भएता पनि, मेरो आर्कले धेरै राम्रो गरिरहेको छ।
PS: कमान्डको साथ एलाभ मलाई लाग्छ कि तपाईंले प्याकेज left प्लाज्मा left छोड्नुभयो, जसले अन्य महत्वपूर्ण प्याकेजहरू समावेश गर्दछ। कमसेकम हिजो जब मैले यसलाई स्थापित गरें, मैले के गरेँ:
sudo pacman -S प्लाज्मा प्लाज्मा-मेटा konsole kdebase-dolphin Kate Sni-qt breeze-kde4 k3b kdeutils-ark
धोका दिनेलाई जवाफ दिनुहोस्
… के यो यति परिपक्व केडीई 4.14.१2018 छ ...? म यसलाई कम्तिमा २०१ XNUMX सम्म प्रयोग गर्ने छु। धिक्कार रोलिंग!
ओस्की ०२ भन्यो
मैले १.15.04.०7300 को सफा स्थापना गरेँ, र NVIDIA GS14.10 कार्डको साथ मेरो छवि समस्या थियो, यो स्थापना समाप्त भयो र यसले कालो स्क्रिन पायो। मैले १..१० पुन: स्थापना गर्नुपर्‍यो।
Osky027 लाई जवाफ दिनुहोस्
अर्नेस्टो मानरिकेज भन्यो
नयाँ सुविधाहरू जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिक महत्व राख्दछन् यहाँ छैनन्, तर चिन्ता नलिनुहोस्, मैले तिनीहरूलाई राखें।
- १ MB० एमबीको र्याम कम खपत (मानिस जसले अधिक उपभोग गर्दछन् किनकि ती केडीई libra पुस्तकालयहरू लोड गर्दैछन, जाँच गर्नुहोस्)
- सबै त्वरित अनुप्रयोगहरूको साथ गति बढ्छ। प्रभाव क्रोम मा क्रूर छ; ऊ २० देखि %०% छिटो हिड्छ, व्यक्तिगत रूपमा।
अर्नेस्टो मान्रोकिजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यसलाई धेरै चोटि परीक्षण गरिरहेको छु र म अझै ट्रेमा धेरै आइकनहरू प्राप्त गर्न सक्दिन किन कि उनीहरूले फोरममा के भन्छन्। यो तपाइँलाई हुन्छ, मैले यसलाई पहिले स्थापना गरेको छु र यसले कन्फिगरेसन पनि बचत गर्दैन।
के यो कसैलाई हुन्छ?
कुन बाहिर आउँदैन?
केहि उदाहरणहरू, उदाहरणका लागि मेगा, ब्लोक्उड, क्लाउड मेल रू।
र कन्फिगरेसन बचत भएको छैन, यदि म बाहिर निस्किन्छु र प्रविष्ट गर्दछु भनेजस्तो लाग्छ मैले मात्र फेरि स्थापना गरेको छु। यो नयाँ र सफा सुविधा हो।
यदि म भर्चुअल मेसिनमा एन्टरगोस प्रयोग गर्दछु भने म ट्रेमा सबै आईकनहरू पाउँदछु, जे पनि स्थापना गर्दछु।
हिजो मलाई पनि त्यस्तै भयो। मैले के गरे भने मेरो / घरबाट सबै कन्फिगरेसन फाइलहरू मेटाईयो। मैले रिबुट गरें र भोला, सेटिंग्सले काम गरिरहेको थियो। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका व्यक्तिहरू मैले प्रयास गरेको छैन, तर कम्तिमा मेगाबाट एउटा मैले प्राप्त गरे भने। म तपाईंलाई एक क्याप्चर छोड्दछु। https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
मैले NVIDIA GS7300 कार्डको साथ समस्या समाधान गरेपछि, यसले प्लाज्मा5लाई प्रतिक्रिया दिँदैन, १ installation.०15.04 को सफा स्थापनाको साथ, यो कालो पर्दा रहन्छ।
मैले प्लाष्ट्मा .15.04..5.3 को साथ कुबन्टु १ XNUMX.०XNUMX स्थापना गरेको छु र एक हप्तामा यो प्रयोग गरिरहेको छु कि यसले मलाई धेरै चोटि हिर्कायो। मैले धेरै खुला अनुप्रयोगहरू, लाइब्रोफाइस + अमारोक + फायरफक्ससँग काम गर्दा केही समस्याहरू देखेको छु र विन्डो परिवर्तनहरूमा हिलाउँदछ र ढिलो हुन्छ।
सफ्टवेयर अपडेटर मलाई मात्र दुई पटक बन्द गरिएको छ।
र यसले मलाई मूर्ख बगहरू फ्याँक्यो जुन उबन्टुको बिटा संस्करण भन्दा पहिले जारी गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ, म फायरफक्सको साथ केही असंगतिको गन्ध छु, किनकि यसले मलाई धेरै समस्याहरू दिएको छ।
कहिलेकाँही मलाई लाग्छ मेरो प्रणाली कुनै पनि क्षणमा भाँचेको छ हाहाहा।
के म लुबुन्टुमा प्लाज्मा install स्थापना गर्न सक्छु?
फ्रैंकलिनलाई जवाफ दिनुहोस्
एमएस अफिसबाट लिब्रे अफिसमा सजिलो संक्रमण कसरी बनाउने